‘नआत्तिनुस्, कम दूरीका रुटमा गाडी चल्नेछन्’ ! « Online Tv Nepal
‘नआत्तिनुस्, कम दूरीका रुटमा गाडी चल्नेछन्’ !
Published : 21 March, 2020 6:36 pm
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै सोमबारदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक गाडी चलाउन रोक लगाउने घोषणा गर्नुभयो । लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीमा मात्रै रोक लगाउने सरकारको निर्णयले मानिसहरुमा कौतुहल पैदा भएको छ । लामो दूरी भनेको कत्तिसम्मलाई भन्ने र सार्वजनिक बाहेकका गाडी चलाउन पाउने कि नपाउने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।